Kpoo anyi - Ndi n’ile nde
Isi ụlọ ọrụ anyị
United Alaeze (UK)
Ngwọta ọpụpụ mbata na ọpụpụ: 22,156
Ngwọta nye Companieslọ ọrụ: 86, 742
Mkpebi iwu: 19,132
Ihe omume 1,000 +
Ndị ahịa: info@millionmakers.com
Ebe saịtị: jobs@millionmakers.com
Ahịa ịre ụlọ : realestate@millionmakers.com
Nkewa: na nkewa@millionmakers.com
Ọrụ: na-elekọta mmadụ
Ndị Mmekọ: mmekọ@millionmakers.com
Ndị nnọchi anya gọọmentị maka mkparịta ụka na njikọ aka na ụlọ ọrụ anyị: govsupport@millionmakers.com
Canada: + 16479456704
Poland: + 48226022326
Singapore: + 6531593709
Brazil: + 556140426941
USA: + 19299992153
Anyị nọ mgbe niile ịkwado gị, ezinụlọ gị na azụmaahịa gị. Mkpụrụ obi, Ọkachasị, Dị Irè, Obi ọmịiko na Nkwenye.
Lezie anya jiri gị n'uche
Anyị ejirila ọtụtụ afọ n'ime mmezu anyị na mmekorita mba na mmekọrịta mba na ibe anyị iji nye ọrụ na ụzọ dị mma maka ndị ahịa anyị n'ọtụtụ ọnụahịa asọmpi.
Anyị na - ekepụta ohere dị iche iche na ndị mmadụ n'otu n'otu na ụlọ ọrụ iji wee nweta usoro ka mma, ahaziri ma hazie azịza.
Ọ bụ ihe gbasara unu. Anyị ga-amatakwu gị, azụmahịa gị na ebumnuche gị nke ọma tupu anyị ekwurịta nhọrọ ma ọ bụ ohere ndị ị nwere.
Site na ahụmịhe anyị dị ukwuu na ọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ anyị nyere, anyị na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ, azụmaahịa na corporates aka site na nka ọpụrụiche anyị ịkwaga, ịkwagide, gbasaa ma too, anyị nwere ọnọdụ dị mma iji duzie gị n'okporo ụzọ ịga nke ọma. Ma ị nwere mmasị ịkwagharị, nnabata na nnweta ma ọ bụ na-achọ ịhapụ usoro ọrụ azụ gị, ịchọ onye isi obodo ma ọ bụ onye nwere usoro ma ọ bụ na-achọ atụmatụ nke ọgbọ ọzọ, nyocha ego na nkwado, ma ọ bụ chọọ ọrụ ụlọ ma ọ bụ ọrụ metụtara ọpụpụ mbata na ọpụpụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ ná mba ọzọ ma ọ bụ azịza IT anyị nwere ike inyere gị aka na ọrụ niile anyị bịara ịkwado
Dị ka otu onye ma ọ bụ onye nwe ma ọ bụ onye isi nke ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ, a na-agbagha onye ọ bụla na ọ bụghị naanị usoro nke ijikwa ọrụ kwa ụbọchị, kama, na-ejikọ ọnụ n'ịhụ na obere oge na ogologo okwu na-aga nke ọma maka onwe ha. Ma dịka ụgwọ ọnụ na-ebili ma nwee ike ịgbaso ihe ndị na-akpata ihe ịma aka ndị ka ukwuu, enwere ike ịhapụ ị na-eche otu ị ga - esi ga - adị ndụ - ịghara ịkọ nke ọma - n'oge ọgbọ ọhụrụ a, ebe a ka anyị ga - abanye.
Nzọụkwụ anyị site nsoro nzọụkwụ - Site na mbido rue n’iru
Nzọụkwụ 1: Choputa mkpa ndi mmadu / ezinulo / azumahia / ulo oru.
Nzọụkwụ 6: Ndụmọdụ ego na ụtụ isi, ọ bụrụ na ọdabara.
Ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ezigbo onye ọlụlụ maka ebumnuche gị yana ebumnuche gị, anyị na ndị na-eme nde na-akwadoro iji hụ na ị ga-eme nke ọma.
Ndị ahịa anyị bụ ezinụlọ anyị, anyị na-echekwa ndị ahịa anyị mgbe niile na enwere anyị ọmịiko na ndidi iji hụ na ha na-aga nke ọma.
Nde Ndị na --eme ihe bụ onye na - eweta ihe nkwụghachi azụ, anyị na - enye ndị mmadụ, ezinụlọ, azụmaahịa na ụlọ ọrụ ahaziri iche na nke na - enyere gị aka na - enyere gị aka ọ bụghị naanị ezinụlọ gị kamakwa mba ụwa maka okwu ndị metụtara mbata na ọpụpụ, ndị mbata na ọpụpụ ọpụpụ, mbata na ọpụpụ azụmahịa, ikike ọrụ, ikike obibi. , ụmụ amaala, agụmakwụkwọ mba ụwa, ndụmọdụ gbasara azụmahịa, ihe ngwọta nke azụmaahịa, ntinye azụmaahịa, usoro HR ahaziri iche, ahịa na ịzụta azụmaahịa, Ngwọta CRM, ọnụ ụzọ nkwanye ụgwọ, usoro ụlọ ọrụ na ikike ọchịchị 98, imepe ụlọ akụ, ndebanye aha azụmaahịa na mba 119 nwere naanị otu ngwa. mpempe akwụkwọ, ikikere azụmaahịa, ụlọ ọrụ mebere, ọnụọgụ nọmba, mgbasawanye mba ụwa, ọrụ iwu, ọnụ ahịa azụmaahịa, ndụmọdụ gbasara iwu, ndụmọdụ gbasara ego, ndụmọdụ ụlọ, tụgharịsịa ngwa ọrụ, akụrụngwa na ntinye ego nke isi obodo, ịdị uchu na nrube isi, anyị na-ahụzịkwa anya n’inye ihe. Nhazi IT nke ahaziri iche dika mmepe web, Eco Ihe ngwọta dị mkpa, mmepe nke ngwa, ahịa dijitalụ, ihe ngwanrọ ngwanrọ na mmepe teknụzụ Blockchain ịkpọ aha ole na ole n'ahịa asọmpi ..
A na-enye ọrụ IT anyị n'ọtụtụ azụmahịa na ụdị na nha ọ bụla. Anyị na-arụ ọrụ ndị na-esonụ:
Anyị na-enye ọrụ na nkwado na ikike ndị ae kwuru ebe a: